It is me. Ko Niknayman.: အထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုမှတ်တမ်း။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှုကြောင့် ကျဆုံးသွားခြင်းအား အထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါကြောင်း၊ ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကရင်အမျိုးသားထုတစ်ရပ်လုံးနှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မျှခံစားရပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 6:06 PM